မျှော့ပါတော့ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 18, 2021 Author admin	Comments Off on မျှော့ပါတော့
ကျမနာမည်က နွယ်နွယ်ဝင်း.. နွယ် လို့ပဲအတိုခေါက်ခေါ်ကြတယ်။ အသက်က ၂၄ ထဲမှာပေါ့.. အိမ်ထောင်ကျတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ယောက်ကျားက ကိုဆန်းထူးတဲ့။ ကားပွဲစားလုပ်တဲ့သူပါပဲ။ ဆက်မပြောခင် ကျမရဲ့ ခန္တာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြမယ်။ ကျမက အသားအရမ်းမဖြူပေမဲ့ ဝင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ခြေသလုံးတွေ ပေါင်တန်တွေနဲ့ တခြားအတွင်းသားတွေက တရုတ်မတွေလို မဖြူပေမဲ့ဝင်းဝါပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ နောက် ကျမရဲ့နို့လေးတွေက အိမ်ထောင်မကျခင်က အတော်ပြားပြီးသေးတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့နောက်ပိုင်း ကိုဆန်းထူးက လိုးကာနီးတိုင်း နို့တွေကို အသေညှစ်လွန်းတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်အတွက် ဆူပြီးမို့လာလိုက်တာ အခုဆိုကိုဆန်းထူးရဲ့ ယောက်ကျားလက်ဝါးနဲ့တောင် ပြည့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ တင်ပါး၊ ဖင်ပေါ့ .. အရမ်းလှတဲ့အထဲမှာ မပါပေမဲ့ ခါးလေးကသေးပြီး ဗိုက်မထွက်တော့ ဖင်က နောက်ကိုကောက်ပြီးဝိုင်းနေတယ်။ အဲလိုဖြစ်နေတာ ဖင်လှတယ်လို့ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျမဖင်က ပုရိသတွေကျလောက်တဲ့ ဖင်ကြီး အိုးကြီးမျိုးပါ။ ယောက်ကျားက ခဏ ခဏပြောဖူးတယ် နောက်ကနေ ခါးသေးသေးလေးကိုကိုင်ပြီးဆွဲဆွဲဆောင့်လိုက်တိုင်း ကုန်းထားလို့ နောက်ကိုဆူထွက်နေတဲ့ ဖင်အသားစိုင်တွေက တုံတုံသွားတာကြည့်ပြီး လိုးရတာ အရမ်းသဘောကျဆိုပဲ။ ပြောသေးတယ် နွယ့် အဖုတ်က မျှော့ပါတော့ အရမ်းစွဲတယ်တဲ့။
ကျမ အတော်ကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ လီးကလဲ မာ.. ခရမ်းသီးကလဲ ဖင်ထဲမှာတင်းပြီးကြပ်။ ကြည့်ရတာ ကိုဆန်းထူး ကျမကို တခြားယောက်ကျားနဲ့ ပေးလိုးချင်နေပြီလို့ ရိပ်မိလာတယ်။ အချက် ၂၀ လောက်မနားတမ်းဆောင့်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်း လရည်တွေကို နို့ပေါ်လာပန်းတယ်..။ ဒီတခါ မျက်နှာပေါ်ထိရောက်တယ်။ ပါးတွေပေါ်မှာ လရည်တွေ ပွနေအောင် ပန်းသွားတယ်။ကိုဆန်းထူးရဲ့ အဆန်းထွင်မှုတွေကြောင့် ကျမရဲ့ လိင်မှုဘ၀ ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသိအမြင်စုံလာခဲ့ရပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ သူလုပ်ချင်တာကို ငြင်းဆန်ဖို့ခက်ခဲခဲ့တာကြောင့် သူကပိုပိုပြီး အတင့်ရဲလာခဲ့တယ်။ တရက်တော့ ၂ ယောက်သားလိုးပြီးလို့ အမောဖြေနေတုန်း သူကပြောလာတယ်။ ” နွယ့် ကို သူများလိုးတာ မြင်ချင်လိုက်တာကွာ..” သူကို မရဲတရဲ မျက်စောင်းထိုးရင်း.. ” ကိုထူးက ကြည်ဖြူတယ်လား..” ” ဪ.. နွယ် ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလား ခံချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ကြည်ဖြူရမှာပေါ့..” ” အံမယ် ပြောပုံက နွယ် ကပဲ သူများလိုးတာခံချင်လို့ ကိုထူးဆီခွင့်တောင်းနေရသလိုလိုနဲ့.. ဟွန်း..” ” နွယ် ကရော အပြောင်းအလဲလေး မခံစားချင်ဘူးလား တခြားလီးတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့..” ကျမ ဘာမှ မပြောပဲ အသာပဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ” ကို့အသိထဲမှာလဲ ဒီကိစ္စပြောဖို့အတွက် အရမ်းရင်းနီးတဲ့သူကရှားနေတာ နွယ်ရဲ့..” ” အန်.. ကိုထူးပြောချင်တာက နွယ် ကပဲ အပြင်ထွက် ယောက်ျားရှာပြီး အကိုရယ် အိမ်ခဏလိုက်ခဲ့ပြီး ကျမကို လိုးပေးပါလို့ ပြောပြီးခေါ်ခဲ့ရမှာလား.. ” အဲလို သူ့ကိုရွဲ့ပြီး တစ်တစ်ခွခွပြောလိုက်တော့ သူက ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ပြီး ” အင်း.. ဒါလဲကောင်းတာပဲ ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့သူဆို နွယ်မကြိုက်တာ ဘာညာ ဖြစ်နေမှာ.. နွယ် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်တဲ့သူကို နွယ် ဖာသာရွေးပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ပေါ့” ဒီလိုပဲ ပြောကြဆိုကြရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျမကို တခြားယောက်ကျား တက်လိုးမဲ့အစီအစဉ်က စကားအဖြစ်ကနေတကယ် လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။
ကျမကိုယ်တိုင်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံနိုင်ဘူး။ တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ကိုဆန်းထူးလီးကိုပဲ ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်ဖူး ကိုင်ဖူး ခံဖူးတာ။ တခြားယောက်ျားလီး ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာရင် စိတ်ထဲကလက်မခံချင်ပေမဲ့ တကယ့် မသိစိတ်နဲ့ ခန္တာကိုယ်က အိနြေ္ဒမရ ဖြစ်ပြီး အဖုတ်ထဲမှ စိုစိစိဖြစ်လာနေတယ်။ ဒါကိုလဲ ဝဋ်နာကံနာလို့ပြောလို့ရမလား မသိဘူး။ တခြားယောက်ကျား တစ်ယောက်ရဲ့ လီးကို အပြင်မှာလက်တွေမြင်ဖူးချင်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ယောက်ကျားက တဂျီဂျီပူစာတာတပိုင်း ကိုယ်တိုင်ကလဲ တခြားလီးနဲ့ စမ်းချင်တာတပိုင်းဆိုတော့ ကျမကို လိုးဖို့အတွက်သီးသန့် ယောက်ျား တစ်ယောက် အမြန်ရှာရပြီလေ။ ကျမက ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ အရောင်းတာဝန်ခံ။ အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုဖြန့်တဲ့အပိုင်းမှာ လုပ်ရတယ်။ ကျမတို့ company က သာမာန် company တွေထက်ကြီးတော့ branch office တွေများတယ်။ တကယ့် ရုံးချုပ်က India မှာရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ Main branch ထားပြီး အခုကျမနေတဲ့ နယ်မြို့လေးကတော့ လက်ခွဲပေါ့။ ကျမအထက်က sale manager က ဒေါက်တာ ဘစီတဲ့။ အသက် ၄၀ နီးပါးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ မိန်းမရှိဖူးတယ်
ကိုဘစီက တရုတ်စပ်တော့ လီးကကျမယောက်ကျားလီးထက်ဖြူနေတာပိုသေးတယ်။ ” နင်ပဲလာကိုင်ပြီးတော့ .. ရော့ဒီမှာ နင်ကြည့်နေတဲ့ ကားထဲကဟာနဲ့ ငါ့လီးနဲ့ ဘယ်သူက ပိုကြီးလဲ..” ” အို.. ကိုဘစီကလဲ.. ဘာတွေပြောနေမှန်း မသိဘူး .. ကိုဘစီဟာကြီးကို ပြန်ထည့်ထားလိုက်စမ်းပါ လူတွေမြင်ကုန်လို့ အရှက်ကွဲနေအုံးမယ်..” ” ငါပြောမယ် နွယ်နွယ်ဝင်း.. ငါ့အခန်းထဲ ဘယ်သူမှ ငါခွင့်မပြုပဲ မဝင်ရဲဘူး.. ဘယ်သူမှလဲ လာစရာမရှိဘူး.. နင် အောကားတွေ ကြည့်တယ်ဆိုတာသာ ငါဖွလိုက်မှ နင်ပဲအရှက်ကွဲမှာ” ကိုဘစီက အကြပ်ကိုင်သလိုပြောတော့ ကျမလဲ ကြံရာ မရဖြစ်သွားတယ်..။ ” အင်းပါ ကိုဘစီရယ် .. လိမ္မာပါတယ်.. အဲဒါကြီးကို ကျမ မျက်နှာနားကနေ ဖယ်ပြီး ဘောင်းဘီထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါနော်…..” ကျမလဲ ကိုဘစီလီးကြီးကို ကြည့်လို့ မ၀နိုင်သေးပေမဲ့ အရမ်းအပေါစားဆန်သွားမှာစိုးလို့ နည်းနည်းမူလိုက်တယ်.. ” အေးလေ.. ပြီးတာပဲ.. တနင်္လာနေ့ နင်ရုံးလာရင် ရုံးက ကောင်လေးတွေ နင့်ကို ဘာပြောကြမလဲ စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒါဆို..” ” ခက်တော့တာပဲ ကိုဘစီရယ်. ကဲပြော နွယ် ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ…” ” ရော့.. ငါ့လီးကြီးကို သေချာကိုင်ကြည့်ပြီး နင့်ရဲ့ အမြင်ကိုပြောပြပေး.. နင့် ယောက်ျားလီးနဲ့ ဘာကွာလဲတို့ ဘာတို့ပေါ့.. ဟဲ ဟဲ ဟဲ..” ” အဟင့်… ကိုဘစီက အရမ်းနှိပ်စက်တာပဲ.. ဒီလိုလုပ်.. ကိုဘစီရုံးခန်းထဲမှာတော့ မလုပ်ချင်ဘူး.. စိတ်ထဲမှာ မလုံခြုံသလိုဖြစ်လို့.. အဲဒါ..” ” ရတယ်လေ.. အဲဒါဆို အပေါ်ထပ်က အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ မီတင်ခန်းအသေးထဲမှာ ငါစောင့်နေမယ်… နင်အခုတတ်လာခဲ့.. ဟုတ်ပြီလား.” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကိုဘစီက သူ့လီးကြီးကို အတွင်းခံထဲ ခွေခေါက်ထည့်ပြီး ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်ကာ ပြည့်တီတီအပြုံးနဲ့ အခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။
“ ကျွီ ”ကနဲ ကားဘရိတ် ဆွဲသံရှည်ကြီးက ထွက်ပေါ်လာပြီးခဏတွင် သူ့ကိုယ်သူ အနိုင်နိုင်သယ်ကာ လမ်းဖြတ်ကူးလာသော သူသည်ကားရှေ့မှာပင် မှောက်ရက်လဲပြီး ကျသွားလေသည်။ နှင်းဝေ တစ်ယောက်ကမန်းကတမ်းကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ရင်း ထိုသူအနားသို့ ရောက်သွားလေသည်။ ကားမီးရောင်အောက်တွင်မှောက်ရက်လဲနေသော သူ့ကို နှင်းဝေ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး မှ စိတ်ထဲတွင်စိုးထင့်ကာသွားလေသည်။ နောက်တဖန်သေချာအောင်ကြည့်လိုက်မိမှ နှင်းဝေ တစ်ယောက် အံ့သြတုန်လှုပ်ကာသွားလေသည်။ ထိုစဉ်တွင် ပလက်ဖေါင်းဆီမှ တဖုံးဖုံးပြေးကာလာနေသောခြေသံများကို ကြားလိုက်ရပြီး ထိုပြေးလာသောလူမှပင် လဲကျနေသော သူ့အားဆွဲကာထူလိုက်လေသည်။ ထိုသူသည် နှင်းဝေ ဖက်သို့လှည့်ကာ ကြည့်လိုက်ပြီး “ဟာ … နှင်းဝေပါလား ” “ ဟင် … ကိုစိန်တင် … ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ? ” “ သူ့ဖာသာသူသွားမယ်ဆိုပြီး လမ်းဖြတ်ကူးသွားတာပဲ …” ထိုသူနှင့် စကားအပြန်အလှန်ပြောရင်း […]
အိပ်မရတာနဲ့ဖေ့ဘုတ်ပွတ်နေတုန်းမက္ဆေ့ကနေ ကလင်ဆိုတဲ့အသံကြားတော့ဘယ်သူစာပို့လာ တုန်းလို့ကြည့်မိလိုက်တယ် အကောင့်စိမ်းမလို့ ပြန်မဖြေတော့ပဲ ဟိုဟိုဒီဒီဆက်ကြည့်နေတုန်း စာထပ်ဝင်လာတယ် နင်ကမာနကြီးနေတယ်ပေါ့ ဆိုတာနဲ့ကိုနဲ့သိတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ် ဖို့သေချာတယ်ဆိုပြီး မဟုတ်ပါဘူးမအားသေးလို့ မပြန်တာစိတ်ထဲမထားနဲ့လို့ စရင်းဘယ်သူလဲလို့ စမေးလိုက်တယ် အကောင့်တုနဲ့ပုံမတင်ထားပဲရင်းနှီးတဲ့အထာနဲ့ ဆိုတော့ကို့မြို့ကဆိုတာသေချာနေပြီလေ profile ထဲဝင်ကြည့်တော့မိန်းခလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်နေ တုန်း အိပ်မရလို့ဟာနင်ပဲမီးစိမ်းနေတာစကားပြော ဖော်မရှိလို့စကားပြောချင်လို့ပြောလာတယ် နင်ငါ့ကိုသိလို့လားဆိုတော့သိပါ့နင်လိုငပွေငရှုပ်ကို မသိတဲ့လူမရှိဘူးဆိုပြီးစကားစတာနဲ့အထာတစ်ခုခု ပဲလို့ချက်ဆိုမီးတောက်လိုက်တယ် ပွေရှုပ်မှန်းသိရင် စကားပြောမနေတော့နဲ့လို့တင်းလိုက်တော့ နင်ကလဲ စတာပါဟတဲ့ လေသံစလျှော့လာတယ် နင်ဘယ်သူတုန်းနင့်ပုံလဲမတင်ပဲငါကဘယ်သူလဲမသိ ပဲနင်နဲ့စကားပြောရတာ အမှောင်ထဲကျွဲစီးပြီးမီးသွေး ရောင်းတဲ့ကောင်လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့နင်ကငါ့ကိုမှတ်မိ ချင်မှမှတ်မိပါမှာတဲ့။ ဒါဆိုလဲနင်ပုံပြဟာလို့ပြောလိုက်တယ် သူကခဏတော့စဉ်းစားရင်း အေ ငါ့ပုံပို့လိုက္မယ် ဒါပေမဲ့နင်ဘယ်သူမှငါ့အကောင့်လို့ပြန်ပြောလို့မရဘူး နော်ငါတို့မြို့ကလူမျိုးတွေကသိတယ်မလား မူဆလင်တွေဆိုတော့ပုံတွေဘာတွေတင်ခွင့်မပြု ဘူး အဲ့တာနင်ဂတိပေးရင်ငါပို့ပေးမယ်တဲ့ အိုကေပေါ့ ပုံကိုကြည့်ပြီးမနည်းစဉ်းစားတာ မမှတ်မိဘူး ဆောရီးနင့်ကိုငါမမှတ်မိဘူးပြောတော့အင်းနင်နဲ့ငါ ကကျောင်းတက်တုန်းကအခန်းမှမတူတာတဲ့ ဘယ်အခန်းကဆိုပြီးပြောမှမှတ်မိလာတယ် အမယ်နင်ကငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူး အရမ်းချောလာတော့ငါကဘယ်ချက်ချင်းမှတ်မိ မလဲလို့ မြှောက်ပေးလိုက္မှ နင်ကတော့ပိုပြီအဲ့လို တော်ကီတွေနဲ့နင်ရည်းစားတွေများခဲ့တာမလားတဲ့ […]